Isbedel doon… Yaa la Bedelaa??
Home » Qormooyinka » Isbedel doon… Yaa la Bedelaa??	Isbedel doon… Yaa la Bedelaa??
20/11/2016	1,026 Views ISBEDDEL DOON : YAA LA BEDDELAA?
Erayga isbeddel-doon waxaa la baxay koox mucaarad ah oo hore u hey jiray jagooyin kala duwan oo ay ka mid tahay R/Wasaare, Guddoomiye Gobol, Madax-Jaamicad, wasiiro iyo ku xigen iyo masu’uliyiin howlo kala duwan ka soo qabtay dalka. Qoladaani waxay abuureen jawi ay ula jeedaan inay iyaga wax ku helaan iyagoo adeegsanaya erayga ISBEDDEL…haddaba, markii la baaray hadafka ay ka leeyihiin erayga waxaa la gala soo baxay in beddelka la rabo uu yahay Madaxdweyne Xasan Sheikh in meesha laga qaado isagoo ku eedeysan inuu fashilmay, waana sababta dad badan oo siyaasiyiin isku sheegaya u cuskadaan codsigooda.
La yaabka ugu weyn wuxuu yahay in dadki jagooyinki ay hayeen laga qaaday laguna beddelay qaar kale oo loo arkay inay dhaamaan ayaa dhehaaya waxbaan beddeleynaa. Maanta waxa ka dhacaya Somaliya waa arrin aad u murugo badan kaddib markii dalkaan burburki ku dhacay kuwii qaybo badan ka soo qaatay ay ku hadaaqayaan waa inuu isbeddel dhacaa. Yaa la beddelaa yaase lagu beddelaa?
Isbeddel hadafkiisa wuxuu ku soo aruuray in Madaxweynaha meesha laga qaado, iyadoo ay joogaan kuwii kala diray dowladii Cabdiqaasim misna ka soo qayb galay baarlamaan-ku-sheegi berigaa abuurmay oo oggolaaday inay ciidamada Itoobiya Somaliya soo galaan waxayna xaqiijiyeen riyadii Amxaarada ay weligeed ku hami jirtay, kuwii iyaga ahaa ayaa ilaa maanta ordaaya oo raba inay talada dalka hogaan ka naqdaan. Marki la taabsiiyay in fashilka Somaliya ka jira ay iyagu sabab u yihiin, siiba inta kor ku xusan oo isu heysta inay yihiin tiirarka dalku ku taagan yahay oon marna laga maarmin..qaar kuwaas ka mida waxay gaareen heer ay Madaxdweyne ka naqdaan maamul goboleed, misna ku dhawaaqay murashax Madaxweyne Federaal, waayoo ma jiro sharci arrimahaan kala hagaaya oo xadidaaya qof gobol madaxweyne ka ah inuusan murashax meel kale ka noqon karin…qofki jagada uu haayo mid ka weyn raba inuun naqdo murashax Madaxweyne waa inuu iska casilaa jagada uu haayo. Waana arrinta ku tuseysa khaladaadka ka jira xagga xeerarka doorashooyinka oo isku wada dhex yaacsan oon la kala garan cidda is-rashixi karta iyo cidda kale. W”aa arrin uu Guddidu aad uga gaabiyay.
WAA MAXAAY SHURUUDAHA LOOGA BAAHAN YAHAY MURASHAXA MADAXWEYNAHA DALKA?.
Shariif Xasan wuxuu leeyahay la-taliyeyaal sharci yaqaan ah oo ka faai’ideystay dulduleelada xeerka doorashada Madaxweynaha…waxay arkeen reer Baay aqoonyarida iyo feejignaan la’aanta ka muuqata Guddiga Doorashooyinka oon heli karin qodobo ay ku horjoogsadaan damaca Shariif Xasan oo ah ruux laqdabada aad ugu dheereeya, danihiisana aan cid u khiyaani karo weligii u daba fadhiisan. Is rashaxaada Shariif Xasan ma ahan mid dhab ah wuxuuna ula danleeyahay inuu caqabado hordhigo murashixiinta qaarkood, waayoo waa qof ku dheereeya laqdabada iyo lugooyada…..laga yaabee markaan inay isaga la gadonto doonta uuna ku waayo nicmada uu hadda heysto!!!
Waxaa maalmo dhjaweyto soo muuqday ruux aad u careysan oo ay wejigiisa ka muuqatay shucuur xasasnimo xambaarsan ood moodo inuu M/weyne Xasan Sheikh si gaar ah wax uga halleeyay…Waxaa fiicnaan lahayd in la weydiiyo bal sheeg meesha uu ku fashilmay Madaxweynaha,..laakin Xasan Sheikh waa iskala weyn yahay inuu la doodo qof mustawihiisu heerkaa yahay ama uu su’aal weydiiyo,waayoo waa hubal inuusan heli kari hal jawaab oo dad qancisa waxa riixaayana ay yihiin neceyb shakhsi ah oo xambaarsan wuxuu soo maqlay laakin uusan garan karin ujeedada ka dambeysa. Wuxuu yiri waa kuu duceynaa..yaa u sheega in Ilaahey uusan aqbalin ducada daalimka balse ay naqan karto cawaaqib xumo isaga soo waajahda waayoo waxaa ka muuqata cadaawo aan geed loogu soo ganban.
Berigii uu Cabdullahi Yusuf ka furtay jabhaddi Kulmis dalka Itoobiya ayaa oday Xamar joogay la maqashiiyay nin caay iyo eedeyn isugu deray Jaalle Siyaad…markaasuu yiri : ninkaan xagow jooigaa? Markaasaa la yiri Addis Ababa..wuxuu yiri Yaaqshiid ha yimaado haddow geesi yahay!!! Waxaa halkaa laga garan karaa in xuriyada la siiyay ummadaan inaysan astaahilin.
Dadweynaha inta dareenka leh ee wax garata oo indhaha kaliya maahee uurka wax ka aragta (siduu Ilaahey Qura’anka ku sheegay) hala weydiiyo hal gef uu galay Xasan Sheikh inti uu talada dalka haayay ama wax dhibaato ah uu geystay.
Haddaba, kuwa raadinaya isbeddelka waa dad aan lagu aamini karin wax xil ah, kaddib markii ay ku fashilmeen jagooyinki hore loogu dhiibay..markaasey maanta ku leeyihiin waxaan rabaa inan naqdo Madaxweyne oo MURASHAX ayaan ahay..laakin badankoodu waxay isu yaqaaniin MUSHARAx!!!..
Sidi hadda ka hor aan soo qoray talyaanigu wuxuu yiraahdaa OGNI POPOLO HA IL SUO GOVERNO dad waliba dowladda ay mudan yihiin ayey helaan.
In dadka noocaas ah ay soo haweyastaan talada dalka waxaa u sababa waxa aan nahay oo ah waxba yahay.
Previous: DEG DEG: Qarax xoogan oo goordhow ka dhacay Muqdisho..
Next: Dagaalyahano Al-shababa oo si dhuumaleysi ku joogay Diinsoor oo gacanta lagu dhigay..
Dawladda Sucuudiga ayaa sheegtay in ay fashilisay weerar lala damacsanaa Minninka barakeysan ee Makka, islamarkaana ...
Waxaad soo xasuusataa Muqdisho oo xaafad walba afarteeda gees xabbad ka socoto. Waxaad soo xasuusataa ...